SHIRWEYNAHA 3AAD EE URURKA JIILUL AMAL. – Hope Generation – جيل الأمل
Muqdisho, 29, Sebtember 2017 (hogeso.org )- Shirweynihii 3aad ee Ururka Dhalinta Rajada (جيل الأمل – Hope Generation) ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa ahaa mid si fiican loo soo agaasimay in badana laga soo shaqeynayey, wuxuu socday hal maalin, Waxaana kasoo qaybgalay ergooyin kala duwan oo isugu jiray xubnaha ururka oo ka kala socda Faracyada Degmooyinka Gobolka Banaadir , iyo sidoo kale madax matalaysay golayaasha kala duwan ee ururka جيل الأمل – Hope Generation .
Shirkan ayaa ah shir sanadlle ah, waana kii sadexaad oo uu Ururku qabto. Ujeedada shirweynaha ayaa ahayd in looga hadlo geedisocodka ururka iyo marxaladaha uu marayo, iyo u diyaargarowga Munaasabadda Sanadguurada Sadexaad ee Ururka. Waxaa ugu horeyn lagu soo bandhigay madasha Shirweynaha 3aad, ajandaha shirka oo ka koobnaa: Guudmarka sooyaalkii taariikheed ee Uruka ee sadexdii sano ee uu ururku jiray, Dulmar ku saabsanaa himilooyinka iyo hiigsiga Ururka, , Talada iyo Tusaalaha Xubinta, Warbixinno kala duwan iyo qodobo kale oo dhowr ahaa.
Shirweynaha waxaa si rasmi ah u furay guddoomiye kuxigeenka Ururka Dhalinta Rajada Mudane Cabdifataax Cali Cabdalla, Sidoo kale waxaa Hadallo qiiro iyo xamaasadba lahaa soo jeediyeen madaxdii shirka kasoo qaybgashay.
Shirweynaha ayaa kusoo dhamaaday jawi deganaan iyo isafgarasho leh, Waxaana gabagabadii Xiritaanka soo afmeeray guddoomiyaha Ururka Dhalinta Rajada Soomaaliyeed Mudane Maxamed Barawaani.
Ururka جيل الأمل – Hope Generation waa urur Dhalinyaro, Madaxbannaan, Maxali ah oo u taagan wacyigalinta, waxbaridda, wanaag u horseedka iyo soo celinta rajada dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaana lagu aas’aasay Magaalada Muqdisho sanadkii 2014